Monday, 20th May 2013 8:04pm.
Categorized by Keyword View All Dhamma Notes View by Author Meditation Tipitka Dhamma Audio Dhamma Video Dhamma Books Sayadaw Photo Dhamma Notes ကုသိုလ်မျိုး ၈-ပါး။ ။ - by Myanmar Cupid Forum - Myanmar Cupid Forum Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ကုသိုလ်မျိုး ၈-ပါး။ ။ by Myanmar Cupid Forum Untitled Document
ကုသိုလ်မျိုး ၈-ပါး။ ။ လောက၌ ထင်ရှားပေါ်လွင်သော ကုသိုလ်တရားရှစ်ပါးဟူ၏။ (၁)ကာမကုသိုလ်-ကာမသုဂတိ ၇-ဘုံသို့လားစေတတ်သော ကုသိုလ်စု၊ (၂) ရူပကုသိုလ်- ရူပ၁၆-ဘုံသို့လားစေတတ်သောကုသိုလ်စု၊ (၃) အရူပကုသိုလ်- အရူပ ၄-ဘုံသို့ လားစေတတ်သောကုသိုလ်စု၊ (၄) လောကီကုသိုလ်-သုဂတိ ၂၇-ဘုံသို့လားစေတတ်သော ကုသိုလ်စု၊ (၅)လောကုတ္တရာကုသိုလ်- မဂ်စိတ်လေးပါး၊ (၆) ဒါန ကုသိုလ်- ၄င်းနှင့်ဆိုင်ရာ ကုသိုလ် ၄-ပါး၊ (၇) သီလ ကုသိုလ်- ၄င်းနှင့်ဆိုင်ရာ ကုသိုလ် ၄-ပါး၊ (၈) ဘာဝနာကုသိုလ်- ၄င်းနှင့်ဆိုင်ရာကုသိုလ် ၄-ပါး။
ကုသိုလ်မျိုး ၁ဝ-ပါး။ ။ လူ နတ် နိဗ္ဗာန် သုံးတန်သောချမ်းသာကို ပေးစေတတ်သောတရားဆယ်ပါး။ ၄င်းကို'သုစရိုက် ဆယ်ပါး'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 'ကုသလကမ္မပထတရား ဆယ်ပါး'ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 'ပုညကိရိယာ ဝတ္ထုဆယ်ပါး'ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုကြ၏။ (၁) ဒါန- သဒ္ဓါကြည်ဖြူ ပေးလှူရခြင်း၊ (၂) သီလ- ကာယဝစီ ထိုနှစ်လီသောဒုစရိုက်ကိုမလိုက်ပယ်ကြဉ်ရခြင်း၊ (၃) ဘာဝနာ- သမထ ဝိပဿနာ ထိုနှစ်ဖြာကို လေ့လာပွားများရခြင်း၊ (၄)အပစာယန-ရတနာသုံးပါး ဆရာ မိဘစသောသူများကို ရိုသေရခြင်း၊ (၅) ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ဖြစ်ဖွယ် ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ကိုသယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ (၆) ပတ္တိဒါန- မိမိပြုရ ကုသလကိုအမျှပေးဝေရခြင်း၊ (၇) ပတ္တာနုမောဒန-သူတစ်ပါးပြု မြတ်ကောင်းမှုကို သာဓုနုမော်ကောင်းချီးခေါ်ရခြင်း၊ (၈) ဓမ္မသဝန- ဘုရားစကား မြတ်တရားကိုကြားနာရခြင်း၊ (၉) ဓမ္မဒေသနာဘုရားစကား မြတ်တရားကို ဟောကြားရခြင်း၊ (၁ဝ) ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ-နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းသောအယူကို ဖြောင့်မှန်စွာယူရခြင်း။
ကုသလ ကမ္မပ္မပထတရား ၁ဝ-ပါး။ ။ ကုသလ-ကုသိုလ်၊ ကမ္မ- ကိုယ် စိတ် နှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကံ၊ ပထ-အကျိုးပေးကြောင်း။ 'ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေးကြောင်း ကုသိုလ်ကံ ဆယ်ပါး'ဟူလို။ (၁) ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ- သေစေလိုသော စေတနာနှင့် သူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၂) အဒိန္နာဒါနာဝေရမဏိ- ခိုးလိုသောစိတ်ဖြင့် သူတစ်ပါး၏ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၃) ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိ- မေထုန်အမှု၌ သူ့သားမယားကို သွားလာမှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၄) မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ- မဟုတ်မမှန်သောစကားကို ပြောဆိုလိမ်လည်မှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၅) ပိသုဏ ဝါစာ ဝေရမဏိ- ချစ်သူနှစ်ဦးတို့ ကွဲပြားအောင် ကုန်းတိုက်မှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၆) ဖရုသဝါစာ ဝေရမဏိ-ကြမ်းတမ်းယုတ်မာသောစကားကို ပြောဆိုမှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၇) သမ္ဖပ္ပလာပ ဝါစာ ဝေရမဏိ- အပေါ့အဖျင်း အနှစ်ကင်းသောစကားကို ပြောဆိုမှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ (၈) အနဘိဇ္ဈာ- သူတစ်ပါးဥစ္စာကို ငါ့ဥစ္စာဖြစ်လာမူ တော်လေစွဟု စိတ်ဖြင့်မကြံစည် မအောက်မေ့ခြင်း၊ (၉) အဗျာပါဒ- သူတစ်ပါးတို့ သေကျေက တော်လေစွဟုစိတ်မှ မကြံစည်ခြင်း (၁ဝ) သမ္မာဒိဋ္ဌိ- ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ၏ ကောင်းကျိုး မကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်း။
(ကုသိုလ်မျိုး ၈-ပါး။ ။ ) by Myanmar Cupid Forum (Myanmar Cupid Forum) http://www.myanmarcupid.net ကုသိုလ် နှင့်သက်ဆိုင်သော ဓမ္မမှတ်စုများ No.	Myanmar Language Title author 1 ကုသိုလ်မျိုး ၈-ပါး။ ။ Myanmar Cupid Forum2ထာဝရ ကုသိုလ်တိုးပွားစေတဲ့ ထာဝရဒါန (၆) မျုိုး အိအိအောင်3အပါယ်လေးပါးမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သော ကုသိုလ်(၇)မျိုး အရှင်ဝိမလဝံသ (နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်)4ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရနိူင်ပါသလဲ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)5အကုသိုလ် ပယ်နည်းများ‏ ဓမ္မရနံ့ List of Dhamma Notes related to Akusala :5Dhamma Notes, DhammaWeb DataBase